Amin'ny kely savvy laminasa ary vonona ny hilefitra fandaharam-potoana, dia afaka miara-tena mora foana sombin iray izay faritany haleha izy hanao ilay dia miavaka toy ny toerana halehany.
Lake Garda dia iray amin'ireo lehibe indrindra Farihy ao amin'ny faritra avaratr'i Italia ary ny lehibe indrindra amin'ny farihy Italia glacial farihy dimy, sakafo ny Nanketo Alpes eto ao amin'ny avaratra. Avaratr'i Verona, Lake Garda no tena fianakaviana – sy ny rano fanatanjahan-tena mitodika ny Italia farihy. Io koa no farihy lehibe indrindra any Italia, nahatratra avy any Alpine an'ilay fiakarana, be lemaka amoron-tsiraka tany avaratra lelan-Po Valley.
Na dia ny vaovao tsara. Lake Garda ny toerana manome azy isan-taona-manodidina mahonon-tena toetrandro izay oliva sy ny voasarimakirana mitombo tsara avaratr'i ny mahazatra isan-karazany. Lavorary ho an'ny sasany tolakandro G&T! Add long sandy tora-pasika ary ny clutch ny tanàna amin'ny farihy promenades hevitra. Efa nahazo ny tenanao ny tonga lafatra fialan-tsasatra toerana halehany!
Fiaran-dalamby Britain, Train Travel China, Train Travel Repoblika Tseky, Fiaran-dalamby Frantsa, Fiaran-dalamby Alemana, Train Travel Greece, Train Travel Holland, Fiaran-dalamby Hongria, Fiaran-dalamby any Italia, Train Travel The Netherlands, Train Travel UK, Travel Europe